Filtrer les éléments par date : lundi, 12 août 2019
lundi, 12 août 2019 12:23
Fandraisana mpampianatra: Nivory ny « Enseignant Non Fonctionnaire » Antsiranana
Nanao fivoriana tao amin’ny CEG PK3 Antsiranana, ny sabotsy 10 aogositra 2019 teo, ireo ENF (Enseignant Non Fonctionnaire) avy amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antsiranana I sy Antsiranana II, ho fanadiovana ny lisitra handraisana ho mpiasam-panjakana.
Nitarika ny fivoriana ny mpandrindram-paritry ny SEMPAMA Nosy aty DIANA sy ireo Sekretera jeneralin’ny SEMPAMA Nosy ao Antsiranana I sy Antsiranana II ary ny biraom-paritry ny ENF DIANA.
lundi, 12 août 2019 12:18
Croix Rouge Malagasy: Efa-taona an-tranomaizina ny sazin’ireo nanodinkodim-bola
Vaky ambatolampy tamin’ny aprily 2018 ny fanodinkodinam- bola teo amin’ny iray hetsy sy iray tapitrisa euro eo, vola fanampian’ny Croix Rouge Norvezianina teo anelanelan’ny taona 2012 sy 2017, taorian’ny fanadihadiana natao.
Tonga teny amin’ny Bianco ny raharaha, ary notsaraina tao amin’ny Pôle Anti-Corruption ny herinandro lasa teo. Nivoaka ny didy, managadra efa-taona an-tranomaizina tomponandraikitra maromaro tao amin’ny Croix Rouge Malagasy, anisany ny filohany teo aloha, ny Sekretera jeneraliny teo aloha, mpikajy volan’ny Croix Rouge Malagasy. Misy nahazo fahafahana vonjimaika, noho izy ireo irakiraka.
Efa eny amin’ny fonjan’Antanimora ny ankamaroan’ireo voapanga. Namoahana didy fampisamborana nandritra ny fotoam-pitsarana kosa ny filohan’ny Croix Rouge Malagasy teo aloha.
lundi, 12 août 2019 12:09
Parlemanta: Hivory tsy ara-potoana manomboka anio
Haharitra 12 andro, manomboka amin’ity 12 aogositra 2019 ity, ny fivoriana tsy ara-potoana voalohan’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona. Lahadinika amin’izany ny fandinihana sy fandaniana ny lalàna 2011-013 nasiam-panitsiana, mifehy ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra eto Madagasikara.
Lalàna efa lany tamin’ny 2011, ary nankatoavin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, fa tsy mbola namoahana didy fampiharana ity averina hodinihina eny anivon’ny Parlemanta ity.
Mandritra ity fotoam-pivoriana ity ihany koa no handrosoan’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta ny Politika ankapoben’ny Fanjakana.
Ho an’ny Antenimieram-pirenena manokana dia isan’ny lahadinika ny fanitsiana ny Fitsipika anatiny.
lundi, 12 août 2019 12:04
12 août: Journée mondiale des éléphants
lundi, 12 août 2019 12:03
12 août: Journée Internationale de la jeunesse